Noopept (GVS-111) powder (157115-85-0) hplc =98% | AASraw
/ Products / Nootropics powder / Noopept (GVS-111) upfu
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika pakukura kweNoopept (GVS-111) powder (157115-85-0), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Noopept (GVS-111) poda ndeimwe yemasimba nootropics anowanikwa pamusika nhasi. Iyo inopa kukurudzira kune kwese cognition uye ine zvishoma psychostimulatory mhedzisiro. Kupesana neakawanda nootropics, mhedzisiro yaNoopept inotanga mukati memaminetsi mashoma ekumedza ichiita sarudzo yakanaka kwazvo pamberi pebasa rinoda mupfungwa.
Noopept (GVS-111) video yepoda
Noopept (GVS-111) powder basic Characters
Name: Noopept (GVS-111) poda
Molecular Kurema: 318.37
Noopept (GVS-111) powder mu SMART mishonga yemishonga
Noopept powder ndiro zita reN-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, a syntheticnootropic molecule.
Noopept (GVS-111) Kushandiswa kwepoda
Nokuda kwehuwandu hwahwo hunoshamisa, iyo inonzi yakakosha yeNoopept powder ishoma, kazhinji 10 kusvika 20 mg inotorwa kakawanda se katatu zuva nezuva. Nhamba haifaniri kudarika 40 mg munguva ye 24.
Sezvo muviri uchinge uchinge uchinetsa Noopept arw powder nokukurumidza, uye une hupenyu hupfupi zvikuru muviri womunhu, zvinoshandiswa kutora maitiro maduku akawanda zvichienderana nechirwere chikuru chikuru kuwedzera Noopept powder's acute effect.
Kana uchitanga neNoopept powder, tinokurudzira kutanga kweruzhinji rune simba, nekunyatsocherechedza, musati mawedzera kuyerwa. Munhu mumwe nomumwe anofanira kusarudza maitiro ake chaiwo.
Mune fomu yemafuta, Noopept powder inowanzoiswa pasi peirimi kana kusanganiswa nemvura uye kunwa. Migumisiro inonzwika nokukurumidza mushure mekutungamira, nekukurumidza sekukati kwemaminitsi e15.
Maererano ne dosing label iyo inouya mu packet inowanikwa muRussia, zvinokurudzirwa kutora Noopept pfumbu yakasvibirira kwemasvondo e1.5-3 uye, kana zvichidiwa, kutanga imwe imwe mhirizhonga mushure memwedzi we 1. Zvimwewo, vazhinji vanoshandisa nootropic vanotevera misi yezuva re56 uye mazuva 4 aripo.
Hazvikurudzirwi kutora Noopept powder manheru manheru sezvo migumisiro yaro ine simba inogona kukanganisa kurara.
Ndezvipi zveZvino Ndinofanira Kutarisira kubva GVS-111 powder (CAS 157115-85-0)
Noopept powder yakanyanya kusimbiswa kubatsirwa ndeyekuti inogona sei kuwedzera chiyeuchidzo nekuvandudza nzira yekudzidza. Noopept powder, kufanana nePiracetam, inobatsira nekurangarira kugadziriswa, asi nezvimwe zvikomborero zvisingawaniki mune zvekupedzisira, izvo zvinoyeuchidza nekurangarira nekuyeuka. Noopept powder inoita kuti utungamiri hwakanaka hwemhando dzose dzekushungurudzika huvepo sezvavanoshandiswa neuropi, iyo inobvumira kuti kuve nekuyeuchidzwa kwekuyeuka. Mune mamwe mazwi, zviratidzo zviri kushandiswa nemanzwi edu zvinowedzera kururamiswa sezvazvinotakurwa muhuro hwedu nenzira yekuyeuka.
Nokushandisa kushandiswa kweNoopept powder, iwe pachako uchaona kuti iwe unogona kugadzira mamwe mashoko uye kuishandura zviri nyore nyore kuti ushandiswe mumabasa ako ezuva nezuva. Iwe unogona kunyange kuyeuka mazita, nzvimbo, zvichida shoko rakataurwa mukana wekuona, rwiyo rwiyo rwawakanga uchifunga kuti wakanga wakanganwa kare, nezvimwe zvakadaro.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti Noopept powder ine high neuroprotective properties. Kukurudzirwa kwee-neuroni kunokonzerwa nehutano hwekuwedzera kunodzivirira kukanganisa kweuchivi uye apoptosis muuropi hwehupi. Varwere vazhinji vane hutano hwekusanganisa nguva dzose vanogona kubatsirwa kubva kune imwe nguva inonzi Noopept poda yakasvibiswa kuitira kudzivirira mamwe maitiro evanoshandiswa pakudzivisa.
Kuwedzera mazinga e NGF
NGF (Nerve Growth Factor) ipuroteni yakasiyana-siyana mumuviri inobatanidzwa mukukura, kuchengetedza, uye kupona kwemasero emasero, kusanganisira masero europi. NGF inofungidzirwawo kuti inokosha mumutambo weeurogenesis, kukwanisa kwemuviri wako kugadzira masero matsva.
Nokuwedzera maNFF muuropi, tinotsigira nzira dzinosanganisira neurogenesis dzinovandudza kushanda kwemashoko emagetsi europiti mukati meuropi, zvichibvumira kutsvaga kwechiredzo. Chigumisiro chinoreva kuti inogona kuvandudza mano ekufunga mune zvese nzvimbo dzekucherechedza.
Kuwedzera mazinga eBDNF
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) imwe puroteni mumuviri ine basa rakafanana kune NGF yakataurwa pamusoro apa. BDNF inoonekwa seimwe yeiyo inonyanya kukosha mumakemikari inobatanidzwa mukuyeuka, kutamba basa rinokosha mune zvose zvenguva pfupi uye kwenguva refu yekuyeuka.
Inovandudza Masangano pakati peBongo Hemispheres
Izvo zvose hemispheres yekodzero neyekupedzisira yehuropi ine basa rayo pachedu. Kuburikidza nekushandiswa kweNoopept powder, rimwe nerimwe remabasa aya rinogona kuwedzerwa kuburikidza nekushandiswa kwezviyeuchidzo zvakasiyana, pfungwa, uye zvinokurudzira. Pane mavara pakati pezvinhu izvi zvinowedzera nzira yatinofunga nayo. Ndokusaka vanhu vakawanda vakataura kuti hupenyu hwavo hwakanga huri nani huri nani kubva pakutora Noopept powder nguva dzose.
Noopept powder (CAS 157115-85-0) inoshanda
Vashandi veNoopept powder vanoshuva migumisiro yekujekesa kunatsiridza, zviri nani kukuyeuka, uye kuisa pfungwa. Zvimwe zvidzidzo zvinotarisirwa kuziva kuti sei Noopept powder inopa zvikomborero zvayo kune uropi hwomunhu. Zvidzidzo pamhuka zvakaratidza kuti Noopept powder yakawedzerwa alpha / beta1 basa munzvimbo dzose dzeuropi.
Mune vanhu, zvichibva pakucherechedza, zvidzidzo zvisina kudzora, Noopept powder zvakaratidza kubatsiridza kubatsiri kune varwere vane hutano husina kugadzikana. Iye zvino, Noopept mahwendefa ebhuruu ehupfuu ari kuongorororwa muchipatara senzira yekurapa kushaya njere kwekupedzisira kwekushungurudza kwakabva uye chikonzero chinokonzera. Uropi hunobatsira hunotorwa kubva ku antioxidant action, anti-inflammatory properties, uye kuvharwa kwehutsinye nekubviswa kwekuwedzera kwegutamate uye calcium. Yakanyatsoonekwawo kuti kuumbwa kweropa uye kuyerera kwakavandudzwa.
Kutorwa nemuromo, Noopept powder inobatwa neyo chirwere chekudya uye zvino nyore nyore kuyambuka ropa reropi. Kana inotarisirwa mumatare akakodzera, inenge yakashandiswa zvachose neuropi, uye zvishoma zvishoma zvakasakara. Chinangwa cheNopopt powder chinonzi glutamate receptor nzvimbo iyo inonzi inosunga ne glutamate uye inodzivisa kuparara. Glutamate, kuva mumwe wevanonyanya kutsvaga neurotransmitter, inotsigira uye inowedzera kusangana kwemagariro.
Noopept powder inokurumidza nokukurumidza kana iri muropa, kuwedzera mazamu mushure mokunge 15 kusvika 20 maminitsi. Vatsigiri vehuwandu hwekuwedzera hunoti mafashamo ekujekesa akaunzwa kuburikidza nekubatsira kwekuwedzera oksijeni kuuropi nekuvandudza kushandiswa kweglucose. Vanhu vazhinji vanorondedzera zvakagadziriswa zviratidzo uye zvakanyanya, mavara akawanda. Vamwe vakatoti vanyatsokurudzira kunzwa pashure pechinguva chiduku chekushandiswa.
Noopept powder is supplementary nootropic iyo yave ichinyanya kufungisisa munguva pfupi yapfuura. Iyo ine ukama hwepedyo kune raive rakakurumbira racetam mhuri ye nootropics iyo inozivikanwa nokuda kwezvavanobatsira pamagariro ekuziva uye pamwe neuroprotective properties. Chii chinokonzera Noopept poda yakasvibirira inonyanya kuonekwa neotropic mubhokisi rako rekushandisa ndeyokuti migumisiro yayo inonzwika pakarepo mushure mekudya.
Manotropic zhinji inogona kutora mazuva, vhiki, kana mwedzi, nekuda kwezvakakwana zvachose kukanganisa asi Noopept poda yakashata ndeimwe nyaya. Chimwe chineotropic chinofananidzwa neNoopept powder's immediate effects is phenylpiracetam.
Pari zvino, Noopept poda yakasvibiswa iri kutarisirwa uye inoparidzirwa muRussia uye nyika dzayo dzakapoteredza nokuda kwehanaotropic yayo. Kuzivikanwa kwaro kwawedzera zvikuru uye iko zvino kwaparadzirwa munyika yose.
Noopept powder sezvinonzi nootropic inowanzoenzaniswa nepiracetam uye aniracetam. Inoshanda nenzira imwechete yakadai sepiracetam asi inofungidzirwa kuva 1,000 kusvika ku5,000 nguva dzakawanda. Kubwinya kwahwo kunoshamisa hazvirevi kuti maitiro ayo anowedzera; zvinongogadzirisa pachazvo zviri nani kumakorokori europi, uye sechikonzero, Noopept poda yakasviba inogona kutorwa muzvishoma zvishoma kubudisa zvakafanana zvakafanana neyaPiracetam.
Noopept powder inonyanya kushandiswa kana ichienzaniswa nedzimwe nhengo dzenotropic nekuda kwekuti yakanyanya sei pamamiriyoni. Kubudirira kwayo uye mari inodhura pamushandi waro wakaita kuti ive inofarira pakati pevanhu vekunootropic.
GVS-111 Mushonga Wakawanda
Noopept (GVS-111) Kudyiswa kwePoda
Kofu yeNoopept Iine Matambudziko Api
Pamusana pezvinhu zvakanaka zvinoitwa neNoopept powder pamusoro pehutano hwako hwehutano, kune dzimwe nguva shomanana dzakashuma migumisiro miduku inofanira kuzivikanwa semusoro, kusagadzikana, dutu, nekutsamwa. Izvi zvinowanzoitika kana Noopept poda yakasvibiswa inotorwa muhotera yakakwirira.
Humwe humwe uchapupu hunoratidzawo kuti Noopept powder inogona kusimbisa migumisiro yekumutsa yakafanana neamphetamines, saka kunyevera kunorayirwa.
Nzira yekutenga GVS-111 powder: kutenga Noopept powder kubva kuAASraw